I-MAMAZOO Bungalows - iCaraiva Sandboarding - I-Airbnb
I-MAMAZOO Bungalows - iCaraiva Sandboarding
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguMaria Ana
Indlu enevaranda entle ngaselunxwemeni lweCaraiva apho uza konwabela ukuphuma kwelanga ukusuka ebhedini okanye ibhedi ekuthiwa yi-hammock uze uvuke ekuseni uqubha. Ngeentsuku ezipheleleyo zenyanga yinto eyongezelelweyo eyonwabisayo efanelwe kukuphila ubuncinci ebomini bakho.
ig: @ bangalosmamazoo
Sinee-bangalos eziyi-2 xa zizonke, zombini zisecaleni kolwandle ngaphambili.
Indlu enevaranda inegumbi lokulala elinye, inebhedi enkulu, izinto zebhedi neetawuli, inethi yokuzikhusela kwiingcongconi, igumbi lokuhlambela elincinci, umatshini wokwenza ikofu, iswekile, ithowusta, iipleyiti, amacephe ne-wifi. Kwindlu enevaranda uza kufumana itafile enezitulo eziyi-2 nebhedi ekuthiwa yi-hammock. Asinayo i-AC kuba asifuni kubethwa ngumoya wolwandle omhle kodwa kukho ifeni esesilingini. Asinikezeli ngesidlo sakusasa ngaphandle konyaka omtsha. Sikhuthaza iindwendwe zethu ukuba zibuke iindawo ezintle ezahlukeneyo ezikufutshane nedolophu kuba zininzi kakhulu abantu abanobuchule ekufuneka udibane nabo. Siza kwabelana nawe ngeendawo endizithandayo xa ufikile apha.
Sibeka ibhotile yamanzi yeglasi epheleleyo efrijini yakho size sigcwalise kwakhona ukuba nje awuthengi iibhotile zamanzi zeplastiki kwaye awubi negalelo ekuveliseni inkunkuma engakumbi:)
Kukho izitulo ezimbini zaselwandle onokuzisebenzisa phambi kwendlu enevaranda. Ukuba uyazihlisa elunxwemeni nceda uqiniseke ukuba ubuyela kwindlu enevaranda. Kuza kufuneka sikubhatalise ukuba zibiwe.
Sifake imephu kwicandelo leefoto ukuze ube nombono wokuba incinci kwaye inqabile kangakanani iCaraiva kwaye ungayifumana indlela.
Ukunikela ingqalelo: 220V !
ICaraíva yidolophana encinci enezitrato ezinesanti ethambileyo. Kukho iivenkile zokutyela kunye neebhari ezisasazwe kuyo yonke ilali, kunye nezona ndawo ziphakamileyo ngaselunxwemeni lomlambo nakwisikwere secawa, zonke zihamba ngemizuzu eyi-10 ukusuka kwizindlu zethu ezinevaranda. Kukho ivenkile enkulu kwicala lomlambo kunye nezinye iimarike ezincinci ezingqonge ilali. Indawo yokubhaka ikumgama wemizuzu eyi-3.
Sithanda ukwenza iindwendwe zethu zihlale ziyimfihlo kodwa ziyafumaneka ukuba unemibuzo, ukungabaza kunye noncedo olufunekayo. Eyona ndlela ilungileyo kukusithumelela umyalezo nge-app yezinto ezenzekayo.